IChina iThickener iBudlene kokusiNgqongileyo LH-312D abavelisi nabanikezeli |Yiman Lanhua
I-LH-312E luhlobo lwe-acrylate polymer.Ingasetyenziselwa ukujiya koshicilelo lwe-pigment, ushicilelo olungalukwanga kunye nokwaleka, kwakhona ukulungiselela kunye nokujiya kuzo zonke iintlobo ze-mucilage, inepropathi elungileyo yokujiya kwaye ilaphu libonisa umbala oqaqambileyo.
-LH-312E luhlobo lwepolymer acrylate.Ingasetyenziselwa ukujiya koshicilelo lwe-pigment, ushicilelo olungalukwanga kunye nokwaleka, kwakhona ukulungiselela kunye nokujiya kuzo zonke iintlobo ze-mucilage, inepropathi elungileyo yokujiya kwaye ilaphu libonisa umbala oqaqambileyo.
Ukwenza incama ngokukhawuleza.Khupha ngokukhawuleza.
Umlinganiselo wokwenza intlama ephezulu kunye nokuxhathisa okulungileyo kwe-electrolyte.
Uzinzo oluphezulu lwe-paste eyenziwe, kulula ukudlula isikrini kunye ne-fluidity elungileyo, akukho sikhunta.
I-Environmental friendly, ayinayo i-formaldehyde, i-APEO kunye ne-kerosene.
Imbonakalo Ubisi olumhlophe lwe-viscous liquid
I-LH-312E ilungele ukuprintwa kwe-pigment okanye ukujiya kwenye inkqubo enamanzi okanye ye-mucilage.
1. Iresiphi yokuprinta i-pigment:
Ibala lebala X%
Amanzi okanye abanye Y %
1. Inkqubo yokuhamba: Ukulungiswa kweNcamathisela-I-Rotary okanye isikrini esicwecwe sokuprinta-Ukomisa (150-160℃, 1.5-3 min).
Qaphela: Inkqubo eneenkcukacha kufuneka ihlenga-hlengiswe ngokwemizamo yokuqala.
1. Cebisa ukulinganisa kunye nokuhlambulula ngokwahlukileyo xa ulungiselela intlama, yongeza ngokulandelelana kwaye udibanise ngokupheleleyo ngaphambi kokusetyenziswa.
I-Pigment Printing Thickener
I-Synthetic Thickener yoShicilelo olusebenzayo
Abancedisi beMichiza, T Shirt Elastic White Silk Ink, Ubushushu obuphezulu bePigment, Hlamba-Sisasazekile Thickener, Ukukhupha Cola iBinder, I-Acrylic Seaping Agent,